भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजमा स्थान दिन नहुने
सामाजिक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी र फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू समाजका अपराधीहरू हुन्। समाजका अपराधीहरू जनताका विरोधी हुन्, समाज बिगार्ने, नागरिकको चरित्र बिगार्ने कुनै अपराधीहरूलाई समाजमा स्थान दिनु हुँदैन। त्यस्ता अपराधीहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार दिनेबित्तिकै चरित्रवान, नैतिकवान, आदर्शवान या सच्चा हुने होइन। भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि निर्वाचनमा उठाउने, उठाएर जिताउने प्रयास सर्वथा गलत हुनेछ। हाल अदालतले दोषी ठहरेर सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले निर्वाचनमा लड्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रावधान राख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागिरहेका छन्। समाजका कुनै पनि सामाजिक अपराधी र भ्रष्टहरूलाई हतोत्साही गरेर भ्रष्टाचार न्यून गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारीहरूलाई बढावा दिने काममा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
पूँजीवाद विचारका सांसदहरू न्यायपूर्ण र आदर्शोन्मुख समाज चाहँदैनन्। भ्रष्टाचारी सांसद तथा नेताहरूको पक्षमा नेकाका सांसदहरू लाग्नु स्वाभाविक हो। भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका सांसद र मन्त्रीलाई फेरि निर्वाचनमा भाग लिने अवसर दिन लागिपरेका सांसदहरू कतै भ्रष्टमतिका त होइनन्? काङ्ग्रेस सांसदहरूले दोषी ठहरिएर सजाय भुक्तान गरेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ताजस्ता व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचनमा उठाएर नेकाले भ्रष्टाचारीहरूलाई बढावा दिन लागेको त होइन? के अब ती पात्रहरू सच्चा नागरिक हुन्छन्? ती पात्रहरू नेकाले काशीको गङ्गाजलले पखाले पनि शुद्ध हुनेछैन। जनताले पत्याउने छैनन्। नेकाका सांसदहरूले दबाब दिएकै भरमा देशको जिम्मेवारी बोकेको प्रमले त्यसलाई आत्मसात गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन।
यो पूँजीवादी बन्दोबस्तको निर्वाचनमा पैसाको छेलोखेलो हुने हुँदा, पैसा बाँडेर जनताको मत लिनसक्ने हुँदा ती भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जित्न सक्छन्। भ्रष्टाचार गर्न पल्केका, पदको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाइसकेका ती व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जितेमा फेरि भ्रष्टाचार गर्न पछि पर्ने छैनन्, पदको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउन पछि हट्ने छैनन्। पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकैले उनीहरूलाई अदालतले सजाय तोकेको हो। त्यस्ता पात्रहरूलाई निर्वाचनमा मात्र होइन अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा राख्नु हुँदैन। भ्रष्ट पात्रहरू निर्वाचनमा उठेर कसरी असल पात्र बन्छन्? भ्रष्ट मनसायका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा मौका दिने प्रयास गर्ने नेकाका सांसद र त्यसको पछि लाग्ने नेकाको नेतृत्वको पनि मन सफा नभएको थाहा हुन्छ। सरकार, राजनैतिक दलले त्यस्तालाई फेरि गलत काम गर्ने मौका दिनु हुँदैन। संसदमा विधेयक पेस गर्ने र पारित गराउने काममा लागेको सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ र त्यस्तो विधेयक पारित गर्नुहुँदैन।